Shirkada Qaadka Ee Faraska Cad Oo Ganacsi Cusub Oo Isugu Jira Kaalin Shidaal Iyo Super Market Soo Kordhisay + Sawiro |
Shirkada Qaadka Ee Faraska Cad Oo Ganacsi Cusub Oo Isugu Jira Kaalin Shidaal Iyo Super Market Soo Kordhisay + Sawiro
Hargeisa(GNN):- Shirkada qaadka keenta ee loo yaqaano (FARASKA CAD )) ayaa waxaa ay maanta magaalada Hargeysa ay ka furatey xurun ganacsi oo cusub .
Xaruntan ganacsi ayaa waxaa ay isku jirtaa Super Market iyo kaalin shidaal Waxaana dhismahan ganacasi ee Shirkada Faraska Cad ay hirgalisay xadhiga ka jaray maayarka Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteco waxaana ka soo qeyb galay qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha deeganka Hargeysa.
Ugu Horayn waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Xuseen Cismaan Oo Ku Hadlaayay Afka Shirkada Faraska Waxana uu Yidhi “Waxaanu u balan qaadanynaa macaamishayada in aanu u jabin doono dhamaan
ganacsiyada kala duwan ee aanu ka iibin doono Haday noqoto shidaal iyo haday noqoto ganacsiyada kalaba, kaalintani waxa ay noqon doontaa mid shaqaysa 24 saacadoodba oo shaqaalaheedunu heegan u naqdaan gudashada shaqadooda .
Sido kale waxa halkaasi ka hadlay Xildhibaan Xasan Shahar waxaana uu uga mahadceliyay shirkada Farska Ganacsiyada kala duwan ee ay dalka ku soo kordhisay Waxaan Uu yidhi “ kolay shirkada waa shirkad ku xidhan ka dawlad hoose ahaan waana shirkad dhaqaake badani ka soo galo Dawlada Hoose Ee Hargeysa.
Mar hadii aad hore u soo qaaday ganacsigaagi oo aad wax cusub ku soo kordhisay caasimada waxaan ku odhan lahaa maadaama oo aad samaysay kaalinta intan leeg waa in aad samaysaa mastoojooyinkii yar yaraa ee Damdamiska Hadii uu dab dhasho si aanu inuugu Fidin.”
Gabagabadii Waxa halkaasi ka hadlay Maayirka Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Solteco) waxaan uu u mahad naqay shirkada Faraska oo iyadu ku soo kordhisay dalka ganacsiyo kala duwan waxaana uu Yidhi “ runtii waa dadaal ay samaysay shirkada Faraska awal hore waxaad maqli jirtay Hebal wuxuu ahaa jaadle oo wuu kacay lakiin maanta waad arkaysaan halka ay marayaan iyo dadaalka ay sameeyeen .
Maayirka oo hadlkiisa sii wata ayaa yidhi “ dhanka kale hadaan ka eegno waa shaqo abuur oo intaa soo dhalinyaro ah ayaa ka shaqaynasaa oo ka xoogsanysa waxaan ugu hambalyaynayaa shirkadan dadaalka ay ka samaysay xaga ganacsiga waxaana aan leeyahay halkaasi ka sii wada waa gaadhi meel ka saraysa halka aad maanta taagantahaye.
Gabagabdii wuxuu Maayirku Soo Dhex Maray Super Market-ka Kaas oo soo indho indheeyay sida loo qalabeeyay.